USA: Ninkii Xasuuqa ka geystay Texas oo u socday inuu dilo Sodohdiis! |
USA: Ninkii Xasuuqa ka geystay Texas oo u socday inuu dilo Sodohdiis!
Mareykanka (estvlive) 07/11/2017
Baaritaanka lagu wado xasuuqa Axadii ka dhacay kaniisada ku taal gobalka Texas ayaa la sheegay inay la xariirtay dagaal u dhaxeeyey ninka weerarka geystay iyo qoyska ay kasoo jeedo xaaskiisa oo booqan jiray kaniisadaasi.
Ninkan oo lagu magacaabo Devin Patrick Kelley ayaa horey uga soo tirsanaan jiray ciidamada Cirka ee Maraykanka, waxaana sanadkii 2012 xabsiga la dhigay ninkaasi kadib markii uu jirdil u geystay xaaskiisa iyo wiil ay dhashay.
Ciidamada Cirka ayaa la sheegay inaysan laamaha amaanka u sheegin xariga ninkaasi oo muddo ku jiray xabsiga militariga Maraykanka.
Maalmihii lasoo dhaafay ayaa la sheegay in gacan-ku-dhiiglaha uu qoraalo hanjabaad ah u dirayey sodohdiis oo la rumeysan yahay inuu doonayey inuu ku dilo weerarkii uu ku qaaday kaniisadii ay tagi jirtay Axad walba. Inkastoo Sodohdiis la sheegay inaysan goobtaasi joogin xiligii weerarka dhacay, balse dadka uu dilay ninkaasi ayaa waxaa kamid ah Ayeeyada xaaskiisa oo kamid ahayd 26kii qof ee weerarkaasi ku dhintay.